चिसो मौसममा स्वस्थ रहने केही घरेलु उपाय ? - Dainik Online Dainik Online
चिसो मौसममा स्वस्थ रहने केही घरेलु उपाय ?
प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७६, आइतबार ५ : १५
पुस माघको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसै जाडो लागेर आउँछ । यसपालि त झन् पुस लागेसँगै पश्चिमी वायूको प्रभावले नेपालमा अत्यधिक चिसो बढिरहेको छ । चिसो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । चिसो सिजनमा विभिन्न रोगहरुले पनि सताउने गर्छ । चिसो मौसममा हुने विभिन्न रोग र चिसोबाट बच्नका लागि सामान्य ध्यान दिन सकियो भने स्वस्थ रहन सकिन्छ । जाडोमा स्वस्थ रहन घरेलु उपायको रुपमा के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ।
शरीरलाई सक्रिय राख्नुहोस्
जाडो मौसममा बाहिर हिँडडुल गर्न अल्छी गर्ने, फूर्सद पाउनसाथ सिरक ओढेर सुत्ने बानी धेरैको हुने गर्छ। यस्तो बानी सुधार्नुपर्छ। बिहान सामान्य व्यायाम गर्ने, हिँडडुल गर्ने, फूर्सदको समयमा करेसाबारीमा आफूलाई व्यस्त राख्ने आदि काम गरेमा शरीरलाई आवश्यक ताप र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। जसले गर्दा रुघाखोकीजस्ता रोग लाग्ने जोखिम घट्छ।
खानपानमा ध्यान दिनुहोस्
तौल बढ्न नदिनुहोस्
छाला स्वस्थ राख्नुहोस्
तातो पानी पिउनुहोस्
रक्तसञ्चार सुचारु भइराख्ने काम गर्नुहोस्
न्यानो कपडा लगाउनुहोस्
बिरामीबाट टाढा रहनुहोस्